Lady Beast - WEBTOON ONLINE BILAASH AH
Lady Beast Celceliska 3.7 / 5 ka mid ah 6
N / A, waxay leedahay 8.4K views
comedy, Fantasy, Lamaanaha, Manhua, Romance, Shoujo
Guur habaysan oo ku dhammaada isku beddel jidh ah ?! Princess Elissa oo aamusan waxay ku nooshahay nolol murugo leh ilaa iyo haatan. Si ay uga fogaato waxaas oo dhan waxay oggoshahay inay guursato daalimka dagaalka, Duke Ginger of Landall Kingdom. Laakiin inkaar xun, lamaanaha cusub waxay ku soo wada toosaan jirka midba midka kale! Inta udhaxeysa howlaha boqortooyada ee kaqeybgalka iyo laqabsiga isbadelkooda jir ahaaneed, miyay qaboojin karaan waqti dheer oo ku filan si ay uhelaan wado ay dib ugulaaban karaan? Mise sidan ayey waligood ugu dhegi doonaan?!
Cutubka 83 February 14, 2021
Cutubka 82 January 26, 2021
Cutubka 81 January 19, 2021
Cutubka 80 January 12, 2021
Cutubka 79 January 4, 2021
Cutubka 77 December 22, 2020
Cutubka 76 December 7, 2020
Cutubka 75 December 2, 2020
Cutubka 74 November 26, 2020
Cutubka 73 November 19, 2020
Cutubka 72 November 19, 2020
Cutubka 71 November 2, 2020
Cutubka 70 October 21, 2020
Cutubka 69 October 15, 2020
Cutubka 68 October 8, 2020
Cutubka 63 September 4, 2020
Cutubka 62 August 28, 2020
Cutubka 61 August 28, 2020
Cutubka 60 August 28, 2020
Cutubka 57 July 22, 2020
Cutubka 55 July 5, 2020
Cutubka 54 July 5, 2020
Cutubka 53 July 5, 2020
Cutubka 52 July 5, 2020
Cutubka 51 July 5, 2020
Cutubka 50 July 5, 2020
Cutubka 49 July 5, 2020
Cutubka 48 July 5, 2020
Cutubka 47 July 5, 2020
Cutubka 46 July 5, 2020
Naqshad Jinsiga Ah Uma Baahan Jaceyl